Course Name -7Habits of Highly Effective People
Description - 'ခုသင်ခန်းစာလေးကတော့ စာရေးဆရာ စတီဖန်ကိုဗေး ရေးသားထားခဲ့တဲ့ “7 habits of highly effective people” အောင်မြင်သူတို့ရဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်း ၇-ခု ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည် ဆန်းစစ် တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးကနေ နယ်ပယ်တစ်ခုချင်းစီမှာအလွန်ထိရောက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတို့ရဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်း ၇ ခုအကြောင်းကို လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 1. Be Proactive 2. Begin with the end in the mind 3. Put first, thing first 4. Think Win – Win 5. Seek first to understand, and then to be understood 6. Synergize 7. Sharpen the Saw'
Objectives - 'အောင်မြင်သူတို့ရဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်း ၇-ခု စာအုပ်ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး စာရေးဆရာ စတီဖန်ကိုဗေး ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်က ကိုယ့်ဘဝကို တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကို လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။'
ဒေါ်စုစုဝင်းသည် University of the Thai Chamber of Commerce မှ စီးပွားစီမံ မဟာဘွဲ့ (MBA) ကို ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် မန္တလေးမြို့ ရှိ Gold Leaf Hotel တွင် Manager အဖြစ် စီမံကွပ်ကဲလျှက်ရှိသည့် အပြင် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးကျောင်းများတွင်လည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။